Dhanaan Media oo kulankii xildhibaanada iyo madaxda DF wareysi kala yeelatay xildhibaan Geelle | dhanaanmedia.com
Dhanaan Media oo kulankii xildhibaanada iyo madaxda DF wareysi kala yeelatay xildhibaan Geelle
September 11, 2017 // admin1 // News2725 Views
Warbaahinta DhanaanMedia waxaa usuuragashey iney wareysi la yeelato Wasiirkii hore ee wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta haddana ah Xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal (Geelle) oo aan wax ka weydiinay arimo badan oo la xariira xaaladda hadda taagan iyo saameynta heshiiskii la sheegey inuu wax ka saxiixay ee loo adeegsadey goaanka golaha Wasiirada. Wareysiga iyo waqtiga uu nasiiyay Xildhibaanka oo aan uga mahadcelineyno waxuu u dhacay sidatan:
Dhanaan Media: Sidaad ogtahay waxaa golaha wasiirada DFS cuskadeen heshiis aad wax ka saxiixdey oo loo adeegsadey dhoofinta iyo qabashada Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbidhagax) bal hawshaas ka waran?
Xildhibaan Geelle: Marhorena waan ka hadlay arinkan haddana waan ku celinayaa. Anigu waxaan goob joog ka ahaa heshiis ay kala saxiixdeen DDSI iyo Galmudug kaasoo lagu dhexdhaxaadinayay dagaalo ka dhacay xaduuddda dad bandanna ku dhinteen. Haba yaraatee heshiiskaasi wax xariir ah lama laheyn iskucelin maxaabiis ama dambiilayaal labada dhinac. Heshiiskaasi waxuu khuseyeey kuna ekaa shaqaaqada markaas ka taagneyd xadka labada dhinac in la joojiyo. Heshiiskaasi waxuu ahaaba lama geynin gole wasiiro ama baarlamaan ansixiya. Madaxweyna DFS kuma uusan soo saarin wareegto. Sideedana heshiis waxuu sharci noqdaa waxna lagu xukumi karaa marka uu maro Golaha Wasiirada, Baarlamaanka, Madaxweynuhuna kusaaro Wareegto.
Dhanaan Media: Haddey sidaas tahay sidee kuula muuqdaa go’aanka Golaha Wasiirada see kusaabsanaa dhiibitaanka Qalbidhagax?
Xildhibaan Geelle: Waxaan u arkaa in aad loo siyaasadeeyey arinkaas, goaanka golaha wasiiraduna aysan u ucuskanin ama heynin wax caddeyn rasmi ah in Qalbidhagax xiriir la leeyahay Alshabaab. Midda kale ONLF waa urur hubeysan oo dhaqdhaqaaq dagaal ka wada gudaha Ethiopia. Ma aaminsani iney gabbaad ka dhigtaan Soomaaliya si ay uga duulaan Ethiopia sababtoo ah Ethiopia waxaa dalka Soomaaliya ka jooga ciidamo tira badan oo ka qaybqaadanaya nabad ilaalinta AMISOM. Waxaan markaas sax aheyn in dal ciidamadiisu ku ilaaliyaan kuna dhimanayaan gudaha waddanka in duulaan hubeysan looga qaado gudaha dalka.
Arinka la xriira ONLF waa Argagixiso, ka baarlamaan ahaan wali xeerka Argagixisada lama ansixin waxuuna horyaallaa Baarlamaanka. Waxaa dood ka abuuran tahay una baahan in la fahmo qeexitaanka Argagixisada. Intaan aniga ogahay ururka ONLF waa urur dagaalama mana ahan Argagixiso laakiin waxaa la dhihi karaa waa nabad-diid. Marxaladda Geeska Afrika marayo haddii la qiimeeyana, dagaal hubeysan masii socon karo waxaana shakhsiyan kula talin lahaa iney nabad qaataan.
Dhanaan Media: Waxaa Dhanaan media lagu soo qorey in idinkoo ah xildhibaanada beesha Absame la shirteen Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha oo aad kala hadasheen arimaha Qalbidhagax?
Xildhibaan Geelle: Waa run waan la shirney labada masuul ee dawladda ugu usareysa waxaana kala hadalnay xaaladda waddanku marayo guud ahaan iyo gaar ahaan arimaha hadda taagan ee ugu horeyso midda Qalbidhagax.
Dhanaan Media: Waa maxay Mawqifka xildhibaanada Beesha Absame ee aad la wadaagteen madaxda?
Xildhibaan Geelle: Madaxweynaha iyo Raysal Wasaarahaba waan usheegney aragtideena kusaabsan Qalbidhagax. Balse Arintaas jawaabteeda dhabta ah waxey hortaallaa Baarlamaanka labadiisa aqal . Waxaanse kuu sheegeyaa inaan arinkaas la aqbali karin sababtoo ah waxaa dhaceysa in dad badan oo Jamhuuriyadda Soomaaliya daggan oo beesha ah lagu waxyeeleeyo loona adeegsado bari ka maalin.
Dhamaan Media: Maxaad is leedahay inuu noqonayo go’aanka labada aqal haddii la horgeeyo arinkan?
Xildhibaan Geelle: Kama hordhici karo go’aanka Golayaasha, aan sugno.
Dhanaan Media: Mahadsanid Xildhibaan